Fanamboaran-javatra vita amin'ny dipoavatra vita amin'ny diplaoma vita amin'ny dipoavatra vita amin'ny alikaola - Vondron'i Shina - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Metric Fasteners > Vita amin'ny kitapo vita amin'ny hoditra
WENAP dia orinasa matihanina, manampahaizana manokana amin'ny famokarana karazam-pandaharana rehetra. Ny vokatra fototra ao amin'ny WENAP dia fitaovana fanatontosana (fanamafisana ireo bobaka, fanamafisana ny ala sy ny fantsika amin'ny fantsika) ary ny fitaovana ara-architecureal (fanodinana rindrina, bolo / tapezina, bozaka vita amin'ny hazo ary karazana bozaka hafa.) Azo atao ny mifototra amin'ny DIN, ISO, ANSI, BS, JIS standard, ary ny hevitry ny mpanjifa. Ny WENAP dia manome ihany koa ny karazan-tsambo samihafa samihafa, fa koa ny vatofantsika, ny bolongana, ny voanjo, ny mpanamboatra, ny fametahana, ny fifehezana ary ny hafainganan'ny orinasa mpiara-miasa.
Product Fampidiran-tsofina fanoratana fanindroa fanindroany
Ny tsatakazo mirefotra dia fantatra ihany koa amin'ny rindrina fantsom-batona na bolt. Ny fonosana an-jorom-bavony dia manana tendrony amin'ny tendrony roa: ny lamosin'ny lamosina amin'ny tendrony iray ary ny kofehy amin'ny kofehy. Izy ireo dia natao mba hampidirana ao amin'ny lavaka mialoha ny lavaka ary tsara indrindra ho an'ny fampiharana ambonimbony, toy ny fampiatoana ny fantsona elektrônika na vy vita amin'ny hazo. Ny WENAP dia manolotra kitapo vita amin'ny kitapo sy fanaingoana.
Product Parameter amin'ny Screw Wood Wood Scoop
Carbon Steel, tsy misy vy
Zinc (mavo, fotsy, manga, mainty), hopitaly dipoavatra (HDG)
Phosphorization, Black Oxide, Geomet, Dacroment, anodization,
Nickel plated, Zinc-Nickel plated
Etsy andaniny miaraka amin'ny milina masaka Ankoatra ny kofehy vita amin'ny kitay hazo eo afovoany
Betsaka amin'ny carton maîtres, avy eo amin'ny pallets, na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Ny fepetra manokana sy ny marika dia azo atao mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Ny endriky ny vokatra sy ny fampiharana ny volo vita amin'ny hazo vita amin'ny dipoavatra roa farany
Takelaka fanoroana kitapo fisaka. Ity fantsona ity dia ampiasaina hanantonana kavina iray eo anoloana varavarana iray na eo ambony, tsy mila mamoaka lavaka, na mahazo miditra amin'ny ao anatiny na eo amin'ny varavarana, na ny vatasarihana na ny tavy.
fampiharana:eo amin'ny sehatry ny rafitra fanorenana ho an'ny indostrian'ny fanorenana, amin'ny milina fanorenana
Ny antsipirihan'ny vokatra momba ny kitapo vita amin'ny hazo fanontam-bato roa farany
Packaging Details:Kitapo, kitapo na kitapo plastika, ary apetaho eo amin'ny pallets, na araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Hot Tags: Double End Plumbing Wood Screw, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Made In China, Wholesale, Buy, Customized, On Stock, Bulk, Price, Price list, Quotation, High Quality